Kushambadzira kune Chinangwa, Kwete eyeballs | Martech Zone
Chitatu, Ndira 28, 2009 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Vatengesi vechikoro chekare vanogara vachiita sevanosungirirwa pa nhamba yemaziso eziso. Ndagara ndiri dhatabhesi uye mushambadzi wakananga, saka ndaifarira kuwana iyo rudyi mboni dzemaziso pane kusunda kushambadza pamberi pavo vese.
Mabhizimusi senge maYellow Mapeji anofarira kuverenga nhamba hombe, futi. Ndakaverenga kamwechete izvozvo 87% yevagari vemuUS vakashandisa maYellow Mapeji muna 2007. Mukuverenga zvakadhindwa zvakanaka, izvi zvakafungidzirwa kuburikidza neongororo yefoni. Pane mibvunzo yakawandisa inoda kubvunzwa kana mumwe munhu akakanda nhamba hombe kwauri, senge:
Kuongororwa kwefoni kwakaitwa nguvai?
Ndeipi yaive huwandu hwevanhu vakaongororwa?
Kangani kutendeuka kwakaitwa kubva kuYero Peji shandisa?
Ndeipi yaive yepakati Kudzoka paInvestment yeYero peji mushambadzi?
Ndeapi huwandu hwevanhu hwakasvika kuvanhu ivavo? Inowirirana nekambani yekambani yevanhu here?
Ndeipi tsananguro ye raishandiswa?
Kuregeredza nhamba huru, izvo maYellow Pages anoenda nazvo chinangwa. Kana mushandisi achivhura iyo Yero Mapeji, ivo vari pachinangwa uye icho chinangwa chingangotungamira mukubatana nemushambadzi.
Injini dzekutsvaga dzinopa mamwe akasimba chinangwa. Kana ndikatsvaga "best mp3 player", mikana ndeyokuti ndiri kuenda kuongorora uye pakupedzisira kutenga zvandiri kutsvaga. Ichi ndicho chikonzero vazhinji mabhizinesi ari kubloga - kupa zvigadzirwa zvavo nemasevhisi neyakakura yekutsvaga injini yekuisa mazwi ekuti mafemu nevatengi vari kuzvitsvaga sei.
Internet Yellow Pages (IYP) yakati siyanei. Aya madhairekitori ebhizinesi anoburitsa ese makuru ekutsvaga injini yekuisa UYE nhamba huru. Kutenda kwangu ndekwekuti IYP inonyatso kudzikisa kugona kwekutungamira kubatanidza kune bhizinesi rako nekuti ivo vanofanirwa:
Enda kune dhairekitori
Sarudza yako saiti kubva kudhairekitori
Enda kune yako saiti
Paunotenga kuisa muIYP, urikurega iyo IYP ive muridzi uye gedhi kune rako bhizinesi kwete rako webhusaiti. Pamusoro pezvo, mutsvaga haakwanise kungori chete Tsvaga, Nyika uye Shandura - vanofanirwa kufamba nedhairekitori. Vatengi vakawandisa uye mabhizinesi vanorasikirwa neshanduko nekuita 1 tinya kure kure.
kutora chinangwa mukufunga, uye kwete nhamba huru, mabhizinesi anofanirwa kuve asina chokwadi nezvesocial network, zvakare. Ndiri kuona vanhu vazhinji vachitaura nezve kubudirira kuwana bhizinesi kuburikidza neFacebook. Ini handipokane kuti kune mukana wekutengesa ipapo, asi ini ndine kupokana kune kune yemushanyi. chinangwa kutenga.
Muchidimbu, dzivisa hype uye simbisa yako epamhepo kushambadzira investments uko chinangwa nemukana uri mukurusa:
Tanga neyakakura yekutsvaga injini yekuisa - kuburikidza nekugadzirisa chitoro chako chepamhepo kana kutora mabloggi emakambani.
Edza izvo zvemukati kuburikidza nemamwe masocial masvikiro.
Shanda pakutengesa nekuchengetedza nzira dzinobatanidza Email Marketing uye Mobile Marketing.
Jan 28, 2009 na11:59 PM
Chinyorwa chacho hachina kunyatsotaura, asi ndingade kubheja kuti ongororo iyi yakangobata nhare dzeKUMBA. Zviripachena haibatanidzi rudzi rwevanhu vasina nharembozha dzekumba kana vasina hanya nekuita ongororo dzakadai. Ini ndinofunga izvo zvinoshandura zvakanyanya mhedzisiro yeongororo.
Ndinobvumirana newe James. Ndinogara ndiine ruzivo nezve 'nharembozha' sezvo vazhinji vari muhuwandu hwevanhu vepamhepo vangave vasina nharembozha yekumba, vasingadaire nharembozha yavo, kana kuti vari kubasa panguva iyo ongororo yakaitwa.
Jan 29, 2009 na12:12 PM
Ini ndinofunga kuti ndinogona kupindura mibvunzo yako maererano nemaitiro akashandiswa pakuongorora nhare dzeYellow Pages.
Hurukuro dzinoitwa zuva rega rega regore kunze kweNew Year, Thanksgiving neKisimusi.
Iyo methodology inoshandiswa ndeyekudhirowa kwedijiti zvinoreva kuti nhamba dzese dzenhare dzepavhu dzine mukana wakaenzana wekusarudzwa paongororo. Iyi nzira inoguma nesample inofungidzirwa kune vanhu vakuru vese vekuUS.
Chikamu che86% chevanhu vakati vakataura nezveYellow Pages vakati vakatotenga kare kana kuti varikuda kuita kudaro.
Avhareji yekudzoka pakudyara kubva munharaunda yekuratidzira kushambadzira imadhora gumi nematatu emari pamadhora ega ega ekudyara.
Nekuda kwemabatirwo anoitwa ongororo iyi, huwandu hwehuwandu hwevanhu hwakasvika mumicherechedzo yeUS vakuru Population. Mushandisi weYellow Pages anenge ari pakati pe25-49, koreji grad, HH mari> $60K, saizi yemhuri > 4, Akafambwa 3+ nguva mugore rapfuura, uye aigara kunzvimbo yavo ikozvino pasi pegore rimwe.
Tsanangudzo yemushandisi munhu anovhura dhairekitori uye anotarisa kune imwe kana akawanda ads.
Jan 29, 2009 na12:19 PM
Wow - ndatenda neruzivo pane iyi Larry!
Ndinobvumawo. Takaona kuti zvakafanana pano paInformation Marketing Institute. Kubata mikana yepamhepo ndiyo nzira yekuenda nayo. Heck ndakatowana yangu blog mukuita. Itarise: http://infomarketingstarter.blogspot.com/